Maalinta Talaadada oo mooshinka loo qaybin doono Xildhibaanada Baarlamaanka Somaliya - iftineducation.com
iftineducation.com – Xildhibaanada Baarlamaanka Somaliya, ayaa waxaa maalinta Talaadada ah ee soo socoto lagu wadaa in loo qaybiyo mooshinka laga keenay Xukuumada C/weli Sheekh Axmed Maxamed.
Wararka ka imaanaaya Magaalada Muqdisho, ayaa waxay sheegayaan in xalay Xildhibaanada Baarlamaanka ee labada garab u kala jabay, ay ku kulmeen Aqalka Madaxtooyada ee Villa Somalia.
Xildhibaanada kulantay, ayaa waxay ahayd laba guddi oo ka kala socotay labada qaybood, ee ay u kala qaybsan yihiin Xildhibaanada Baarlamaanka, waxayna labadaasi guddi ka wada kooban yihiin min shan Xildhibaano.
Xildhibaanada, ayaa waxay isku waafaqayn in la joojiyo kulankii Axada berrito ah ee Baarlamaanku uu lahaa, isla-markaana kulanka laga dhigo maalinta Talaadada ah, loona qaybiyo mooshinkii laga keenay Xukuumada.
Sidoo kale waxay Xildhibaanadu isku waafaqday in toddobaadka soo socdo ay ka doodaan mooshinka, codka kalsoonidana loo qaado Xukuumada, iyadoo aan buuq iyo sawaxan midna la samaynayn.
Tani, ayaa waxaa loo arkaa midda kaliya ee lagu badbaadin karo Dowladda Federalka Somaliya, maadaama khilaafka Madaxda Dowladda uu saameeyay dhammaan Hay’adihii Dowladda.
Khilaafka Madaxda Dowladda, ayaa si rasmi ah waxa uu u soo shaac baxay 25-kii bishii hore ee October, markii Madaxweynuhu uu ka horyimid isku shaandhayn uu sideed Wasiiro ah ku sameeyay, Ra’iisal Wasaare C/weli Sheekh Axmed.
Daawo video Sida Looga Baashaalo (tumasho) Maalmaha Khamiista iyo Jimacaha Xeebta Jaziira magalada muqdhiso,.